Muuri News Network » Aqriso Magacyada Wasiirada Xilka laga qaadayo iyo Wasiirada Cusub ee lagu badali doono
Aqriso Magacyada Wasiirada Xilka laga qaadayo iyo Wasiirada Cusub ee lagu badali doono
Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya ayaa dhawaan lagu wadaa in isku shaandheyn kooban lagu sameeyo, waxaana wararka soo baxaya sheegayaan in qaar kamid ah Golaha Wasiirada xilka laga qaadi doono laguna badalayo Wasiiro Cusub.
Madaxweynaha Soomaaliya, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’izul Wasaaraha ayaa isku afgartay in isku shaandeyn lagu sameeyo Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya, waxaana hada madaxda ay isku afgarteen wasiirada xilka laga qaadayo iyo kuwa lagu badalayo .
Wasiirada cusub ee lagu soo darayo Xukuumada Soomaaliya ayaa waxaa kamid ah Faarax Sheekh Cabdi Qaadir oo ah Mudane ku dhaw Madaxweynaha Soomaaliya horeyna usoo noqday Wasiir, waxaana loo badinayaa in Faarax mar kale lagu dhigayo Wasiirka Dastuurka.
Xubnaha kale ee Golaha Wasiirada kasoo dhax muuqan doono waxaa kamid ah nin ay isku hooyo yihiin Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan , waxaana lagu magacaabaa ninkaas Maxamed Cabdi Nuur Madeer, waxa uuna horey usoo noqday Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ee sadaxda Gobol.
Wasiirada xilka laga qaadi doono ayaa waxaa kamid ah sida aan Wararka ku helnay Wasiirada Caafimaadka Xaawo Xasan Maxamed , Wasiirada Waxbarashada Khadra Bashiir Cali iyo Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Cabdiweli Ibrahim Sheekh Muudey.
Waxaa sidoo kale Wasaaraha loo kala badali doonaa qaar kamid ah Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya , Wasiirada isbadalka saameenayo Wasaaradahoodana laga badalayo waxaa kamid ah, Wasiirada gaadiidka badda iyo Dakadaha , wasiirka Dastuurka iyo Wasiiro kale oon magacyadooda aanan helin.
Isku Shaandheynta lagu sameenayo Golaha Wasiirada ayaa la filayaa in ay dhawaan dhacdo, waxaana hada socda wadatashiyadii ugu dambeeyay ee arintan ka yeelanayaan Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh, Gudoomiye Jawaari iyo Raizul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid